Guddiga Amniga oo Markii ay Cabsadeen shiray Soona Saaray inaan la Bannaan Bixi Karin. - Muqdisho Online
Home Wararka Guddiga Amniga oo Markii ay Cabsadeen shiray Soona Saaray inaan la Bannaan...
Guddiga Amniga oo Markii ay Cabsadeen shiray Soona Saaray inaan la Bannaan Bixi Karin.
Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo markii la rabanna loo yeero markii kalana la aamusiiyo ayaa xalay guddoomiyey shir loogu yeeray in looga hadalyo amiga iyo xaaladda amnidarro ee soo wajahday Madaxtooyada oo ay ku soo fool leeyihiin bannaan baxyo xiriir ah. Magaalda waxaa ka jirta Cabsi xoogan oo soo wajahday MW Farmajo oo bilaabay inuu u yeero dad aan ehel u ahayn dejinta xaaladda iyo nabad ku soo dabbaalidda Magaalada. Maxamed Yusuf iyo Maxamuud Cali Ugaas dad u shaqeysta dantooda waxayna la shaqeystaa cidii maalinkaas wax siisa. MW iyo RW waxay ahayd inay yaqaannaan cidda ay kala xaali karaan arrimahan cakiran.
Dakaddii waxaa xertay shabaab oo dhowr maalin waxay u xerneyd amar ay dul dhgeen waxbana kama soo dagin. Shabaabka oo magaalada xukumaa ayey muujineysaa waxaana ku xigi doona in ay xeraan dhammaan magaalada.
Dhinaca kale waxaa Magaalada ka soo socda Kacdoon bannaanbaxyo la iclaamiyey, waana sababta keentay inay xalay isu yimaadaan Mahadi, Yariiisow iyo Ducaale oo beryahan u beenguurayey Madaxweynaha una sheegayaan inay iyaga wakiil ka yihiin Mudullood oo ay gaarsiiyaan lacagaha loogu dhiibo ugaaska iyo Imaamka Xamarna ay labadaas gacanta ugu hayaan.
Eng. Yariisow oo ka war bixiyay natiijada shirka ayaa sheegay in la isla gartay in bulshada Soomaaliyeed ay muujin karaan shucuurtooda oo ay la xisaabtami karaan dawladda si nabad ah. Laakiin sidee ayey nabad ku imaneysaa mar haddii waddo kastaa xeran tahay askartana loo fasaxay inay xabadaha nool nool dadka ku isticmaalaan. Sida askari laga soo xigtay oo uu sheegay xabad inaysan ridi Karin haddii aysan hubineyn inay gaartay ujeedadii loo riday oo ah inay wadanaha goyso cida lagu riday.
Waxaa layaab leh inuu sheegay Guddoomiye Yariisoow in booliisku ay gacanta ku hayaan shaqsiyaad loo soo qabtay mudaaharaaydadii shalay ka dhacay Xamar laakiin dadkii ay dowladdu laaysay waxaa dilay askari baxsad ah oo mas’uuliyadda cidna ma laha oo saga ayey ku kooban tahay.
Guddiga amniga ayaa ka digay in la sameeyo mudaaharaadyo rabshado wata ayna mamnuuc tahay in magaca bajaajlayda ay isticmaalaan shaqsiyaad doonaya in amniga ay carqaladeeyaan, oo qalalaase geliyaan caasimadda dalka. Guddiga oo been cad gabbaad ka dhiganaya waxay rabaan inay banneystaan inay wax dilaan waayo oo ciddii soo baxdaa lagu sheego inay ammaanka carqaladeyneysay bajaajleydana aysan ka wakiil ahayn xataa haddii ay oyadu sheegto cidda ay ka wakiilka tahay.
Sidoo kale Xalay waxaa guryahooda lagala baxay dhallinyaro aad u badan oo lagu eedeyey inay ka qeybqaateen bannaanbaxyadii shalay, waana waddada dowladda ay cagta saartay oo ah waddo kalitalisnimo.
Previous articleCuba working to rescue two doctors abducted in Kenya
Next articleKulankii Gaadiidleyda Gobolalka Banaadir iyo maamulka Gobolka oo fashil ku soo dhamaaday